Sunday December 08, 2019 - 12:18:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Roobab mahiiggaan ah oo 72-dii saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay inta badan gobollada dalka Soomaaliya ayaa sababay khasaara nafeed iyo kuwa maaliyadeed.
Gobollada Bari,Nugaal, Mudug iyo Sanaag oo ay ka da'een roobabka ugu xoogan ayaa lasoo sheegayaa in wali ay hakad ku jiraan isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka waaweyn kadib markii ay roobabku jareen waddooyinka.
Roobabka ka da'ay gobollada Waqooyi Bari iyo Mudug ayaa ahaa kuwa dabeyllo watay kuwaas oo jaray xarkaha korontada iyo kuwa isgaarsiinta, illaa 2 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen roobabka oo xoogoodu ka da'ay dhulka xeebaha ku teedsan.
Dhinaca kale roobab saacado badan da'ayay ayaa lagasoo sheegay gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya, roobabka oo bilaawday xalay abaara 12:00 habeenimo ayaa soo gaaray maanta barqadii.
Magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo Wabiga Shabeelle ku fatahay ayaa lasoo sheegayaa in biyaha xareedda ay saameyn ku yeesheen dadka barakacayaasha ah, garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ayaa markale ku xirmay roobabkii xalay da'ay.
Dhanka gobolka Sh/Hoose ugu yaraan hal qof ayaa dhintay kadib markii biyaha roobka ay buux dhaafiyeen waraha deegaanka Kuunya Barroow, gabar yar oo 8 sana jir ah ayaa la sheegay in daadadka roobka ay dileen.